KASHIFAAD: Suntii Badda Somalia, armay Bariga isu badashay? - Caasimada Online
Home Warar KASHIFAAD: Suntii Badda Somalia, armay Bariga isu badashay?
KASHIFAAD: Suntii Badda Somalia, armay Bariga isu badashay?
Waxaa mahad iska leh allah, naxariisna iyo nabad galyo korkiisa ha’ahaato nibigiisii, waxaan salaamayaa dhamaan akhristayaasha.
WadankaSomaliaayaa mudo aad u dheer iska ahaa wadan baylaha oo aan cidina ka warqabin xuddudihiisa cirka, dhulka iyo badaba. MudadaasSomaliawaxay noqotay qashinqubka ay wadamada aduunka wasakhda kusoo daadiyaan. Wasakhadani ma ahan mid caadiya ee waa noocyada khatarta badan ee radiological (nuclear) Biological, iyo chemical dhibaato wayna u gaysta caafimaadka bini’aadamka isla markaasna ay aad u adagtahay in la suuliyo ama ay kharash aad u badan ku kacayso in la xabaalo.
Hadii dhulka lagu aaso waxay wasakhaysaa biyaha dhulka hoos mara ee laga cabo ceelasha, hadii bada lagu duugo waxay sumaysaa kaluunka iyo noolaha kale ee bada kuwaasoo ay ku sumoobi karaan dadkii cuna, hadii hawada lagu sayro iyogaa gaas ahna adka iyo geedaha ayaa ku sumooba naqas kaas.
Waxaa jira shirkado lacag badan ku qaata in ay xabaalaan suntaas, laakiin qaarkood ayaa xiriir lasamaystaan, mafiyada aduunka iyo madax tuugo ah oo ka tirsan dawladaha wadamada soboolka ah. Meeshii ay shirkadu malaayiin dollar ku bixin lahayd in ay si sax ah u aasto suntan ayay inta markab kabuuxiso kusoo diidisaa wadamada nidaam xumadu ka jirto sidaSomalia.
20 kii sano ee lasoo dhaafaySomaliawaxay ahayd meesha ugu liidata meelaha liita ee aduunka xaga dawladnimada iyo ilaalinta xuduudaha. Cid ka warqabta majirto waxa maraya hawadaSomalia, bada ama kasoo gash dhulka.
Maalman waxaa soo badanayay cudurada aan horay loo aqoon ama aan badanaan jirin sida burooyin waawayn oo dadka kasoo baxa wajijiga, qoorta, caloosha iyo meelo badan oo jirka kamida. Kansarku wuxuu ahaan jiray cudur aad ugu yarSomalialaakiiin hada, burooyin kansar ah oo aan la daawayn Karin ayaa kasoo baxay dad badan. Cudurada maqaarka kudhaca aad ayay usii badanyaan. Meelaha qaarkood waxaa lagasoo sheegayaan, kaluunkii oo xeebaha kusoo caarinaya isagoo mayd ah. Kaluumaysatada xeebuhu waxay soo sheegayaan in kaluunkii uuba yaraaday.
XeebahaSomaliawaxaa kusugan kumanaan maraakiib ah oo wax leh iyo waxa ay hayaan aan laqoon. Meesha Qaarkood iyadoo loo jeedo ay bada dhedeed ku warshadaynayaan kaluunkiiSomalia. Waxaa la arkay mariik hubaysan, oo isticmaalaya qaabab kaluumaysi oo aduunka laga mamnuucay markii ay arkaan doomaha kaluumaysatada somalidana rasaas huwiya doomohoodana burburiya. Xeebaha qaarkood kaluumaysatadii somalida waxay uga qexeen arintaas.
Xaga bariga waxaad maqlaysaa diyaarado wax leh aan laqoon oo ku meeraysanaya deegaamo wax dhibaato ama daagaalo ah oo ka jira aysan jirin, meela qaarkood waxaa la arkay iyaga oo uruursanaya duurjoogta qaaliga ah ee waliba Somalia kasii yaraanaysa. Manta waxaan ka akhristay warbaahinta in diyaarad ay ku daadisay wax aan la aqoon dagaan lagu magacaabo Alleybaday Halkan ka akhriso warbihintaas.
DawladaSomaliaiyo maamulada ka jiroSomaliawax warakamahayaan haddii sun lagu kordaadinayo guryohooda. HawadaSomaliawaxaa iska maamusha hay’ad ka tirsan Qaramada Midoobay oo malaayiin canshuura ka qaada diyaaradaha ganacsi ee dulmaraSomalia. Hay’adaasi wax kale oo ay hwadaSomaliauqabato majirto, ma dabagasho cidii sharci daro ku marta hawadaSomalia, mana uruuriso dhacdooyinka noocana ee maalinwalba ka dhaca hawada.
Canshuurta hawadaSomalianiman aan waligoodSomaliaimaanin ayaan huteelo Nayroobi kuyaala isga jiifa, baabur qaaliya ka wada iibsaday mushaarna isaga cuna.Somaliamalaha wax ciidan badeed ama cireeda oo talaabo kaqaadi kara arimahan, waana arimoSomaliaugaara oo meelkale oo sidan u liidata majirto.
Maadaama ay dawladaSomaliahada ka baxday ku meel gaarnimadii waxaa looga fadhiyaa madax waynaha cusub iyo dawlada uu soo wadaba in ay hawada Somali maamulkeeda dib ula wareegaan, ayna dabagal ku sameeyaan dambiyada caalamiga ah ee ka socda hawada iyo badaSomalia. Waa in dib loo hawl galiyaa ciidamadii bada iyo cirka si ay wax uga qabtaan arintan oo xal kale loo heli Karin.
Waana in dabagal lagu sameeyaa dabiyadii horay udhacay si maxkamad loola tiigsado cidii ay ku cadaato in ay ka qayb qaadatay sumaynta ka socotaSomalia. Muumulada iyo dadwaynaha Somalia waxaan ugu baaqayaa in ay uruuryaan dhacdooninka arintan kusaabsan wixii lala yaabo oo lagu arko bada, bariga ama kasoo daadta hawadana waa in la kaydiyaa (samples) si hadhow baaritaan loo mariyo, si looga digtoonaado caafimaad ahaan looguna adeegsada cadayn ahaan markii loo baahdo.